Taariikhdu Qarin-Mayso, Ilaahayna Qadin Maayo by Abdi Kaariye Jibril | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Taariikhdu Qarin-Mayso, Ilaahayna Qadin Maayo by Abdi Kaariye Jibril
Taariikhdu Qarin-Mayso, Ilaahayna Qadin Maayo by Abdi Kaariye Jibril
Posted by admin on November 15th, 2013 05:55 PM | FADHIGA SUBULAHA
Taariikhdu qarin-mayso, waa hees aad u macaan oo aan had iyo jeer TVga Qaranka ka dhagayso, goor walbana TVga Qaranku ku celceliyo oo Xakumada KULMIYE dacaayad ka dhigato. Dhaliyaro “Inamo iyo hablo” aad u cod macaan ayaa qaada. Waa xaqiiq aad ii soo jiidatay, runtii waan ku raaxaystaa waayo taariikhda ayaan wax badan ka aqaanaa oo been ma sheegto.
Waa run oo taariikhdu qarin-mayso, wax kasta oo aduunka ka dhaca sax iyo khaladba. Si kasta haddii dadka qaarkii isku dayaan inay qariyaan, xaqiiqa jirta taariikhdu qarin-mayso. Waa laga yaabaa inay u shaqayso ayaamo kooban laakin taariikhdu dib ayay isu saxdaa oo runta ayaa guulaysata. Taariikhdu waa mindi laba af leh wanaaga iyo khaladka labadaba way qortaa. Runtii waan qirayaaa dawladdu inay wax badan qabatay, hadana waxaan leeyahay khaladka ayaa badan.
Taariikhdu qarin-mayso, boobkii doorashooyinaka qaranka saddex sano ka hor oo taariikhdu qarin-mayso, shaqaalihi qaranka ee dhamaanood lagu eryay KUMIYE ayaad cod siin waydeen – xitaa washmanadii masaakinta ahaa ee axsaabtaba kala aqoon.
Taariikhdu qarin-mayso, hantida qaranka ee sida cad loo boobaayo ay ka mid tahay cashuuraha faraha badan ee shacabka miskiinka ah laga qaado, ee beenta loo sheegay. Filaayay in wax luugu qabto haddana jeebabka masuuliyiinta xakuumadda soo dhaafin.
Taariikhdu qarin-mayso, deeqihii dawladaha iyo hayadahu dalka ugu deeqeen ee dalka soo gaadhay, haddana la waayay,sida Airports. Meeday lacagtii EU du ee ($550,000,000).
Taariikhdu qarin-mayso, boqolaakan disme ee hore u jiray, inta ringi la mariyay, hadana xadhiga laga jaraayo ee looga dhigaayo shacabka dhismayaal cusub oo xakuumadu soo biirisay.
Taariikhdu qarin-mayso, qandaraasyadan la garanayn goor la iclaamiyay iyo goor la qaatay midna la ogayn ee dadka gaarka ah loogu naas nuujinaayo.
Taariikhdu qarin-mayso, saxaafiddii xorta ahayd ee shalay u hiilisay KULMIYE oo hadh galay la soo weeraraayo (Hubaal) xakuumadana lagu eedaynaayo, maantana xeer cusub oo cabudhinaya xakuumadu soo wadato.
Taariikhdu qarin-mayso, boqolkan waddo ee dhagaxa la dhigay ee hadana midna wax laga qabtay jirin ee shacabka deegaanadu la il daran yihiin ee hadana KUMIYE ku faanayo. Taariikhdu qarin-mayso, tahriibtii dhalinyada iyo xoogi dalka Somaliland oo gaadhay heerkii ugu badnaa abid intii xakuumadani jirtay.
Taariikhdu qarin-mayso, nabad gelyadii reer Somaliland ku naaloonaysay oo ka sii daraysa. Tusaale ahaan, Mujaahidiintii dalka xoreeyay oo hadh galay la weeraraayo sida Mujaahid Ibrahim Dhegawayne iyo Xidhibaan Qabille. Ta ugu daran ee wiigan dhacday oo Mujaahid Mohamed Kaahin hadh galay la weeraray, taas oo dawladdu sugi kari wayday nabad gelyada Mujaahidiinta, Masuuliyiinta iyo Shacabka. Add iyo aad baanu uga xunahay falkaa foosha xun. Waxa raaca kufsiga iyo budhcadnimada oo hadda aad u sii badatay. La ma soo koobi karo, laakiin taariikhduna qarin-mayso.
Waxaan xasuusta maqaal Qarannews qortay waagii xakumada Madaxwaynaha Somaliland Md Silaanyo 100 cisho jirsatay oo ahaa “Boqol Cisho iyo Boqol khalad”. Maantana waa Kun Cisho iyo Kun Khalad.
Waxaan hadalkaygan ku soo gunaanadayaa KULMIYE Xakumadi Md Daahir Riyaale dacaayad buu ku riday ay iska difaaci kari waayeen, laakin dawlad kuma haysan karo. Dawlad dacaayad iyo faan uun ka adag.
« Dalkaada Badbaadi ama Damu Jadiid u hiili -Olola la dagaalanka Damu Jadiid oo xoogeeystay.iyo 3dii Golaha Sare
Halkan ka Daawo dhibaatada la gaadhsiiyay dadka Ethopianka ah ee sacuudiga caruur dumar iyo mudaharad baladhan maanta laga sameeyay USA »